Gerard Pique Oo Laba Hadal Kaliya U Sheegay Ciyaartoyda Barcelona Kadib Guushii El-Clasico, Muxuu Ku yiri? - Wargane News
Home Sports Gerard Pique Oo Laba Hadal Kaliya U Sheegay Ciyaartoyda Barcelona Kadib Guushii...
Hal qof ayaa la ogyahay inuu si daran ugu farxay si shaki la’aan ah guushii ay kooxdiisa Barcelona ka gaartay Real Madrid ciyaartii El-Clasico ee horyaalka, waana wiilka dagaalka ba’an kula jira xitaa maamulka Madrid ee Gerard Pique.
Jamaahiirta Real Madrid ayaa ku oriyay bilowgii ciyaarta Gerard Pique kuwaas oo aan jecleen daafaca reer Catalan, sidoo kalana Sergio Ramos ayaa ku eedeeyay xidigaan inuu masuul ka ahaa casaankii la siiyay madama uu aad u hadal badnaa.
Si kastaba daafaca Balaugrana ayaa ahaa xidigii libinta helay kaas oo qosol ku sagootiyay garoonka loogu hanjabay in loogu jawaabi doono markii uu wax ka sheegay Madrid, isagaana sadex dhibcood kala dhaqaaqay caasimadda.
“Waan ka fiicanahay Real Madrid, Waan Ka fiicanahay Real Madrid” Ayuu ugu celiyay ciyaartoyda Barcelona dhamaadkii El-Clasico.
“Waligeen waan ka fiicneen”
Ugu dambeyntii Barcelona haatan waxey hogaanka La Liga ku heysaa nidaamka minan iyo marti ee lagu go’aamiyo kooxda qaadeysa horyaalka marka laba kooxood isku dhibco noqdaan madama ay Madrid 4-dhibcood ka heysataan xili ciyaareedkaan, balse Los Blancos kulan baaqi ah ayey heysata